Noocyada moodada - Tabaha ku saabsan Isbeddellada Ragga Stylish | Ragga Stylish
Noocyada moodada ayaa badan waana hubaal in inbadan oo idinka mid ah ay soo labisteen in kabadan hal munaasabad. Isbeddellada sannadkan, hubaal qaar ka mid ah ayaa calaamadeeya qaabkooda iyo shakhsiyaddooda, had iyo jeer leh dhawaaqa iyo jaangooyada ku habboon qaabkooda gaarka ah ee lebbiska. Qaabka aad u labisato ayaa go’aamin doonta shakhsiyaddaada oo hubaal waxaad had iyo jeer u dhigantaa dharka moodada ah qaabkaaga shaqsiyeed.
Noocyada moodada ayaa loo sameeyay qaab dhismeed, moodooyinka ama saamaynta ka dhacday taariikhdeenna oo wax badan ku leh waqtiga, fasalka bulshada, baahiyaha ama nooca shaqada iyo gaar ahaan cidda xidhatay iyo saamaynta ay ku abuuri karto qaabkeeda wakiilnimo.
1 Hababka moodada
1.1 Qaabka caadiga ah
1.2 Habka Minimalist
1.3 Qaabka Casriga ah / Aan Rasmiga ahayn
1.4 Habka guridda
1.5 Habka Avant-garde
1.6 Qaabka dhagaxa
1.7 Qaabka Hippie
1.8 Qaabka isboortiga
1.9 Hipster qaabka
1.10 Qaabka magaalada
Siyaabo badan oo loo labisto waxay abuureen qaab aad u calaamadeysan in sanadihii la soo dhaafay aysan waxba iska badalin qaabkooda iyo halabuurkooda, laakiin faahfaahinta iyo maryaha mar walba lagu soo kordhiyay ee ka dhigay inay horay u socoto.
Qaabkani si ballaaran ayaa loo adeegsadaa iyo sannadaha oo dhan ayaa loo isticmaalay dadka fudud, oo leh miyir, shakhsiyad dhab ah iyo dheelitirnaan weyn. Si kastaba ha noqotee, waa dadka leh qiyam dhaqameed, in kasta oo qaabkiisa labbiska loo adeegsan karo qaab gaar ah qof kasta. Waxay u muuqataa inay tahay dhar fudud, oo aan lahayn qurxiyo xad dhaaf ah iyo midabyo dhexdhexaad ah, kaliya haddii ay jiraan wax ay tahay inay is-barbardhigaan waxaa loo samayn doonaa hab aad u khiyaano badan.
Iyagu waa dhar fudud, oo leh khadad fudud, nadiif ah iyo faalig iyo iyada oo aan la abuurin mug. Midabyoku waa monochromatic had iyo jeer isticmaal cad, madow, beige, buluug khafiif ah, cagaar saytuun ah, buluug buluug ama cawl. Ujeeddadiisu waa inuu had iyo jeer labisto, ilaa kan ugu dambeeya iyo gaar ahaan in aan la dareemin. Dhameystirka si dhif ah ayaa loo isticmaalaa haddii la adeegsadana kama soo baxaan inta kale.
Qaabka Casriga ah / Aan Rasmiga ahayn
Isku-xidhka dharkaagu wuxuu muujinayaa raaxo, dharkiisu waa caadi la style a scruffy, iyadoo aan loo eegin in si buuxda loo xardhay. Laakiin qaabkaagu ma doonayo inaad isku hubiso dhar gabi ahaanba bidix ah, laakiin halkii ayaan ku dhammaysan karnaa dharkaaga qurxoon oo leh dhar caadi ah oo aan ku siinno muuqaal dhab ah laakiin aan rasmi ahayn. Waa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan uguna firfircoon, oo leh dhar dabacsan iyo midabbo dhexdhexaad ah.
Waxaa jira dhar la dhigey qarniyo ka dib illaa waqtigeenna oo illaa maanta la jecel yahay goosgooskooda iyo daabacaaddooda. Fikradda ayaa ah in la isku daro a dharka guridda leh ugu wanaagsan ee xilli kasta oo sidaasna ku abuur dhammaan qaabkan. Jaakadaha Corduroy, surwaal leh goyn cayiman iyo qalabyada qaarkood sida brixton caps waa dharka lagu garto.
Maxaa qeexaya? Ereygiisa ayaa qeexaya, tag safka hore, qaabkii ugu dambeeyay. Waxay u muuqdaan inay yihiin dhar lagu rakibay qaab magaalo ah oo ka soo horjeeda qadiimiga, halkaasoo ay la socoto isbeddellada ugu dambeeyay. Ku surwaalku waa adag yihiin, shaatiyadu waa qaabab joomataris iyo midabada ugu weyn waa madow iyo caddaan, in kasta oo codadkii hore sidoo kale la isticmaalo.
Qaabkani waa mid aan shaki ku jirin, isaga oo leh jaakaddiisa maqaarka madow sida dharka ugu weyn. Wali waa mid la jecel yahay waana mid raaxo leh oo loo adeegsan karo. Taabashadiisa shaqsiyadeed: xidho joonisyo jeexan, kabo, funaanado aasaasi ah ama koox daabacan, diilimaadyo badan qaarna waxay ku habboon yihiin surwaal maqaar caadi ah.
Dharkiisu wuxuu muujinayaa farxad iyo jacaylka dabeecadda, waana inaad ku aragtaa isaga midkiisa oo keliya surwaal jilicsan, shaatiyada ubaxa iyo qaabab kala duwan, xarago badan, jaakado iyo ragga qaarkiis xitaa waxay ku dhiiradaan goono dhaadheer. Had iyo jeer ku ilaaliso horyaalkaas sheeko xariirooyin iyo farshaxanimo.
Tegitaanka isboorti shaki la'aan waa habka loo xirto dhar ku habboon si loogu tababaro isboorti. Laakiin xaaladdan sidoo kale waa in la istcimaalaa dhar aad u raaxo leh loona geeyo kulan kasta ama dhacdo kasta, iyada oo loo xirayo mid aan rasmi ahayn oo shaqeynaya. Guushiisu waxay kuxirantahay ugu yaraan mid kamid ah dharka qaabkaas oo marwalba la isku daro leh kabo isboorti
Qaabkan dhashay qarnigan waana marka ay dhalinyaradu rabaan inay soo bandhigaan qaabkooda labiska ilaa kan ugu dambeeya, iyagoo ka walwalsan dharka ay mar walba xirtaan ku darista dhadhanka iyo farshaxanka. Iyagu waa kuwa jaangooyooyin u ah inay xiraan timo sidoo kale wata magacooda iyo oo leh gadhka. Qaabka ay u labistayaan waxaan ka arki karnaa funaanado caw ah, surwaal nooca maqaarka ah, koofiyado iyo kabaha isboorti ee nooca wada hadalka ah ama kabaha gadaal.
Moodhadhkani waa mid casri ah oo waxay dib isu soo nooleyneysaa tobanaan sano. Dhar raaxo leh oo raagaya ayaa loo xiraa si looga hortago xawaaraha dhaqdhaqaaqa magaalooyinka. Qaabkiisa waligiis kama baxo qaabka fududna marwalba waa la raadiyaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Hababka moodada
Sida loo helo duufaan ruxruxo oo timo gaaban ah